Mhuri Tattoos - Inofadza Mhuri Tattoo Ink Mazano kune varume nevakadzi
Best 24 Family Tattoos Design Mazano Kune Varume nevakadzi
Muchiitiko chaunenge uchitarisa kuwana tattoo yemhuri, zvino verenga mberi kuti uwane mamwe mashoko. Isu tine zvimwe zvekunakidza chaizvo zvinyorwa zvemhuri zvinogona kusarudzwa kubva. Paunenge uchifunga nezvekutora tattoo kana kwete, unofanirwa kusarudza kuti uwane kupi pamuviri wako. Chirongwa chemhuri chinonyanya kukosha kune nhengo uye chisungo chinoshamwaridzana nacho icho chinhu chaunogona kuratidza chete kana uine muviri wako.
2. Mhuri Tatoo yakagadzirwa nevarume
3. Tora mifananidzo yemhuri
Kune mhuri dzaizoramba dzichida kuramba dziri pedyo kune mumwe nemumwe uye nzira chete iyo ino inogona kuitika ndeye apo pane tattoo inogona kuiswa paruoko.
Chinhu chikuru chaunofunga kufunga, kana ichi ndicho chinyorwa chako chekutanga, ndizvo zvinorehwa neshoko. Mhuri yekutora yakave yambiki inoremekedzwa iyo imwe nhengo yemhuri inogona kushandisa kusangana nevamwe.
Kune vamwe vanhu kunyanya madzimai, mutsipa #family tattoos zvimwe zvezvigadziro zvaungaita kushandisa kuti uone nevose vemhuri.
Kana pane chiitiko chaunoda tattoo mune chikamu chemuviri wechipfuva, unofanira kufungisisa zvazvinotora uyewo kuti unoda sei vamwe kuti vazvione. Mhuri dzemaziso ndeimwe yemattoos akaisvonaka iwe unogona kufunga nezvazvo.
Mhuri yehondo #tattoo inogona kushandiswa kumirira mhuri yako kana uri kure nemusha. Vanhu vanofunga nezvekuwana mamwe emhando dzakanakisisa #designs pasi pano apo paine mhuri yekutora.
6. Imwe mhuri inotyisa yechiratidzo
Mhuri ndeyekusingaperi uye hapana nzira iri nani yekuzvitaura pane kuinyengedza mumuviri wako sezvizvi.
7. Mhuri chirairo pavarume ruoko
Kune vanhu vanozviona ivo sevatanidzi vematoto uye ivo vachangozadzisa basa re #art pamitumbi yavo nekuwana mhuri tattoo.
8. Mhuri yakanyora tattoo
Pane dzimwe nguva apo munhu achapinda muchitoro chekunyora uye havazove nechinangwa chavanoda. Utano hwemhuri hunonakidza hahudi kuve hwakaoma. Paunenge uine zviratidzo izvi, vanhu vanowanzofananidzira maonero ako pamusoro pehupenyu.
Vamwe vanhu vachawana tattoo uye iwe hauzoni kuti chii chaicho chisati chave paganda rako. Ichi ndicho chikonzero vanhu vari kutsvaga hukama hwepedyo nevomumhuri vanowanzoenda kumatato anoita saizvi.
9. Mhuri yakanyora tattoo yevarume
Iwe uchaona imwe neimwe yemagadzirirwo ako pamadziro emadzimai anofungidzirwa isati yanyengwa uye iwe uchabvumirana nepepeti risati yasvika ganda rako.
10. Mhuri yemapfupa tambo yakagadzirwa
Vanhu vakawanda kupfuura imwe nguva ipi zvayo mumangorangariro yemazuva ano vari kushandisa maziso asina kushanduka sevabereki vemhuri, uye iye zvino iye zvino anozivikanwa zvikuru, vakachinja kuva chinhu chakakosha.
11. Mwoyo uye mhuri kutora zvinyorwa pamakumbo
Pamberi pacho, zviratidzo zvaiwanzo mararamiro evana vaduku, uye vaigona kushandisa zvinhu zvakawanda kuti vazive asi nevechirwere chemhuri, chero ani zvake anozvishandisa pane imwe nhengo yemitumbi yavo; gumbo rinogona kuva nzvimbo inofadza yekuisa inki yako.
12. Mhuri inokurudzira tattoo
Mune mhaka ipi zvayo kuti iwe unoda kuwana mhemberero yemhuri yakanyora, unofanira kufunga kuva nechimwe chinhu chakadai.
13. Mucherechedzo uye mhuri yakarongedza maitiro pavakadzi kumashure
14. Rose mhuri tattoo
Mhuri yaRose tattoo haigoni kuregererwa pose paunoiona. Tora chimiro chako kune imwe nhamba inotevera kana iwe uine maruva emarota tattoo.
15. Mhuri yemiti tattoo
Uyezve, mifananidzo yemhuri inogona kushandiswa kuti ione kuti yaizoita sei panzvimbo yayo, pasina chikonzero chekushandisa mari yakawanda pamutambo usingagoni kubudiswa zvakanaka.
16. Mashoko Mhuri Tattoo
17. Mhuri Yechechi tattoo pavarume ruoko
Pasinei nezvose zvaunoda kana zvasvika kumamato emhuri, kune zvakawanda zvekugadzira zvaungashandisa kuti uende kunze kwevanhu.
18. Mhuri nyore nyore tattoo pfungwa
Kune zvisikwa, ngano, dolphins, sharks uye zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvaunogona kuva nazvo, kusanganisira pfungwa dzakagadzirisa zvirongwa pamuviri wako asi iyi mhuri yekutora iri kunze kwenyika ino.
19. Cool Tattoo pfungwa pamusoro pevakadzi kumashure iyo inomiririra mhuri
Pakave nekuwedzera kwechisarudzo chemavara emhuri mazuva ano nekuda kwekudiwa kwekubatana pamwe nekushamwaridzana kwedu munyika.
21. Makuru mazita emhando yemicherechedzo yemhuri kumadzimai kumashure
Vakasiyana vakadzi vanoziva maitiro ekuratidza mhuri dzavo mifananidzo uye ichi ndicho chikonzero nei iwe uchigonawo kushandisa shanduro iyi yakanaka.
22. Kudzokera Mhuri Tattoo
23. Mhuri tateti dzeGuys
Kana uri kufunga nezvekutora chimiro chisingaperi, zvisinei iwe usingakwanisi kugadzirisa maitiro ekugadzirisa angakufananidza iwe zvakanakisisa, ipapo imwe pfupi ndiyo yakarongwa yakakwana.
24. Mhuri tattoo pfungwa dzevarume
Tags:mhuri mifananidzo tattoos for girls tattoos kuvanhu
compass tattoohenna tattooAnkle Tattoosinfinity tattooFeather Tattooscorpion tattooarrow tattooelephant tattooshamwari yakanakisisa tattoosGeometric Tattoostribal tattoosbutterfly tattoosshumba tattookorona tattoostattoos for girlsbirds tattoosflower tattooseagle tattoosmaoko tattooscat tattoosmimhanzi tattoosAnchor tattoosrose tattoostattoo yezisorip tattooskoi fish tattoooctopus tattoocross tattooslotus flower tattoofoot tattooschifuva tattooshanzvadzi tattoossleeve tattoosHeart Tattoosangel tattoosmehndi designdiamond tattoocute tattooszodiac zviratidzo zviratidzomwedzi tattooszuva tattooscouple tattoosrudo tattooswatercolor tattoocherry blossom tattooneck tattoosback tattoostattoo ideasarm tattoostattoos kuvanhu